Loading Point for Sabiha Gökçen | RayHaber | Railway | Highway | telegrama fiara
HomeTORKIAFaritra Marmara41 KocaeliSabiha Gökçen'e Kocaelikart Loading Point
09 / 11 / 2019 Levent Elmastaş 41 Kocaeli, ANKAPOBENY, Airports, Highway, Tire Wheel Systems, Headline, Faritra Marmara, TORKIA 0
Hijery ny mombamomba feno Sabiha
Sabiha Gökçen'e Kocaelikart Loading Point; Iray amin'ireo mpiara-miasa amin'i Kocaeli Metropolitan Municipal, TransportationPark A.Ş. , mifanaraka amin'ny fangatahan'ny mavesatra avy amin'ny olom-pirenena Sabiha Gokcen serivisy entana natolotra ho an'ny mpandeha. 7 Kocaelikart loading, izay nanomboka nanome serivisy hatramin'ny alakamisy dia afaka nahazo mari-pahaizana feno ho an'ny olom-pirenena.
MITOMOTRA INDRINDRA MOMBA NY FIVORIANA
Tonga tamin'ny vaovao avy amin'ny Kaominin'i Metropolitan ny olom-pirenena Mifanaraka amin'ireo fangatahana mavesatra avy amin'ny mpandeha, napetraka ao amin'ny seranam-piaramanidina Sabiha Gökçen ny fametrahana kocaelikart. Mifanaraka amin'ilay rafitra izay hanomezana fahafaham-po ny olom-pirenena maniry ho tonga any Kocaeli avy amin'ny seranam-piaramanidina, ny mpandeha dia afaka handefa TL mankany Kocaelikarts avy amin'ny tapakila tapakila.
7 NIVORA INDRINDRA
7 Manomboka amin'ny Alakamisy Novambra, ny Kocaelikart point point 250 sy 250G dia hanome fahafinaretana ho an'ny mpandeha mandehandeha amin'ny fiaramanidina seranam-piaramanidina. Afaka mizaka mora foana avy any amin'ny seranam-piaramanidina ny olom-pirenena rehefa miverina. Ny mpandeha koa dia afaka mividy tapakila tokana ampiasaina raha tsy eo amin'i Kocaelikarts.
TOROHEVITRA AZY ARY NY FAHAGAGANA AIRPORT
Mifanaraka amin'ny fampiharana ny mpandeha mahatsapa ny fametrahana azy ireo dia nahafaly azy ireo be tokoa, nangataka ny fametrahana ny rafitra toy izany izy ireo ary nanatanteraka ny fangatahana ny tsy hamelana tsy firaharahiana ny kaominin'i Kocaeli Metropolitan.
Ny tsipika vaovao avy amin'i Gebze ho Sabiha Gökçen; 250G 21 / 09 / 2017 Ny fitaterana mankany amin'ny tokan-tena ao Kocaeli MetropolitanPark dia manomboka ny tsipika 250G eo anelanelan'ny Gebze sy ny seranam-piaramanidina Sabiha Gökçen. Fitaterana Ny tsipika 250G, izay hampifandray amin'ny Valan-javaboary, no hapetraka eo anelanelan'ny Gebze Bus Station sy ny seranam-piaramanidina Sabiha Gökçen amin'ny alatsinainy Oktobra.
Fialam-boly mahazatra mankany Sabiha Gökçen 21 / 10 / 2017 Ny tsipika, izay mitondra fiara fitateram-bahoaka mankany amin'ny seranam-piaramanidina Sabiha Gökçen avy ao amin'ny Kocaeli Metropolitan Municipality, dia nosoloina fitaterana haingam-pandeha mahafinaritra. Yasin Özlü, General Manager of Park AŞ
Ho tonga any Sabiha Gökçen ny metro Istanbul 19 / 08 / 2014 Hiitatra hatrany Sabiha Gökçen ny metro Istanbul: Ny andalana metro ao Istanbul dia hiparitaka avy ao Kaynaşlı mankany amin'ny seranam-piaramanidina Sabiha Gökçen. Amin'ny volana septambra ny savoka ho an'ny tsipika vaovao 25. Minisiteran'ny fitaterana, raharaham-barotra sy serasera maritime, metro metro Sabiha Gökçen
Filazantsara ho an'izay mampiasa Line 200 ..! Fitaovana Kocaelikart ho an'ny Istanbul 05 / 11 / 2019 Filazantsara ho an'izay mampiasa Line 200 ..! Fitaovana Kocaelikart ho any Istanbul; Kocaeli Metropolitan Kaominin'ny fangatahan'ny olom-pirenena mba tsy hijanona ho tsy miraharaha ny distrikan'i Istanbul Kartal (sehatra IETT) fitaovana famenoana Kocaelikart natolotra ny serivisy. Avy any Istanbul ka hatrany Kocaeli…
Tontolon'ny tontolon'ny Yavuz Sultan Selim 12 / 08 / 2016 Ny ankamaroan'ny tetezana Yavuz Sultan Selim: ny 3 Istanbul. Hisokatra amin'ny volana aogositra ny tetezana Bosphorus Yavuz Sultan Selim Bridge 26. Ireto misy ny fampiavaka ilay andro tetezana goavambe talohan'ny fanokafana ... 3 mikambana amin'ny andaniny roa amin'ny Bosporus.…
Ny tsipika vaovao avy amin'i Gebze ho Sabiha Gökçen; 250G
Fialam-boly mahazatra mankany Sabiha Gökçen
Ho tonga any Sabiha Gökçen ny metro Istanbul
Filazantsara ho an'izay mampiasa Line 200 ..! Fitaovana Kocaelikart ho an'ny Istanbul
Tontolon'ny tontolon'ny Yavuz Sultan Selim
ENİPE Toeram-piasana Efficiency Energy ary vokatra Fair and Summit
Fanamarihana mikasika ny tolotra: Famerenana ny famindrana, famindrana ary fametahana ny fitrandrahana 320.000.pcs mikasika ny Polatlı sy Sincan
Filana Mariho: Sudurağı Station an simenitra, fihazonana Wall, fametrahana fandavahana famenoana miasa ho an'ny fametrahana ny 4 fanampiny Area fitsihany. Fanolorana ny asa fanodinana ny lalana sy ny jiro
Fanamarihana momba ny fikarakarana: Famerenana ny endriky ny 7 izay manamboatra fiaramanidina ho an'ny famerenana sy famindrana ny làlan'ny foibe Köseköy Logistics
Fanamarihana momba ny fanangonana: Fanolorana fanomezana ho an'ny famandrihana, famindrana ary fanodikodinam-pandrenesana vita amin'ny sambo 3.050